” ဝါးပက်လက်ကုလားထိုင် ” အသုံးပြုသူများ ရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရပ်ပြီး သေဆုံးနုိုင် - Real Gaming Myanmar
” ဝါးပက်လက်ကုလားထိုင် ” အသုံးပြုသူများ ရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရပ်ပြီး သေဆုံးနုိုင်
ရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရပ်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှု့ရပ် ကာ ဦးနှောက်သို့သွေးမရောက်လျင် လူသည် ၅ မိနစ်အတွင်းသေစေနိုင်သည်ကို သိပြီးသူများ ပါသည်။နှလုံးခုန်မရပ်ပဲ ဦးနှောက်မှာ သွေးကြောပိတ်ကာ သေဆုံးဖူးသူတွေရှိပါသည် အက်စီးဒင့်မဟုတ်ပဲ အမှတ်တမဲ့ဖြစ်တတ်သော ကိစ္စမို့အများကသတိမထားမိကြပါ …. ။
ထိုအရာမှာ ဝါးပက်လက်ကုလားထိုင် ပင်ဖြစ်၏ တချို့က ထိုထိုင်ခုံပေါ်လှဲလျက်စာဖတ်ခြင်းအိပ် ခြင်းများ ပြုလုပ်တတ်သည် ။ထိုင်ခုံ၏ ခေါင်းမှီတန်းမှာ ဦးခေါင်းနောက်စိသွေး လည်ပတ်ရာကို ဖိမိပြီးဖြစ်သလိုဖြစ်နေတတ်၏ နှလုံးမှဦးခေါင်းသို့ ပို့လွှတ်ပေးသောသွေးများက ပိတ်ဆို့ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိလေသည် …… ။
ကျွန်တော့်၏ အသိမိတ်ဆွေမှာထိုသို့ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး သူသည် အထက်ကပုံစံမျိူး ပက်လက်ကုလား ထိုင်ပေါ်အိပ်နေပြီး ပြန်လည်သတိမရပဲသေဆုံးသွားခဲ့ဖူးလေသည် ။ ။စေတနာဖြင့် အသိပေးရေးသားလိုက်ပါသည် သတိမူ၍ဂူမြင်နိုင်ကြပါစေ …… ။
Credit: Sai Min Thant
ရုတျတရကျနှလုံးခုနျရပျပွီး သှေးလညျပတျမှု့ရပျ ကာ ဦးနှောကျသို့သှေးမရောကျလငျြ လူသညျ ၅ မိနဈအတှငျးသစေနေိုငျသညျကို သိပွီးသူမြား ပါသညျ။နှလုံးခုနျမရပျပဲ ဦးနှောကျမှာ သှေးကွောပိတျကာ သဆေုံးဖူးသူတှရှေိပါသညျ အကျစီးဒငျ့မဟုတျပဲ အမှတျတမဲ့ဖွဈတတျသော ကိစ်စမို့အမြားကသတိမထားမိကွပါ …. ။
ထိုအရာမှာ ဝါးပကျလကျကုလားထိုငျ ပငျဖွဈ၏ တခြို့က ထိုထိုငျခုံပျေါလှဲလကျြစာဖတျခွငျးအိပျ ခွငျးမြား ပွုလုပျတတျသညျ ။ထိုငျခုံ၏ ခေါငျးမှီတနျးမှာ ဦးခေါငျးနောကျစိသှေး လညျပတျရာကို ဖိမိပွီးဖွဈသလိုဖွဈနတေတျ၏ နှလုံးမှဦးခေါငျးသို့ ပို့လှတျပေးသောသှေးမြားက ပိတျဆို့ပွီး အသကျအန်တရာယျရှိလသေညျ …… ။
ကြှနျတေျာ့၏ အသိမိတျဆှမှောထိုသို့ဖွဈခဲ့ဖူးပွီး သူသညျ အထကျကပုံစံမြိူး ပကျလကျကုလား ထိုငျပျေါအိပျနပွေီး ပွနျလညျသတိမရပဲသဆေုံးသှားခဲ့ဖူးလသေညျ ။ ။စတေနာဖွငျ့ အသိပေးရေးသားလိုကျပါသညျ သတိမူ၍ဂူမွငျနိုငျကွပါစေ …… ။
Previous: သမီးဖြစ်သူက အဖေနဲ့ ပြန်ပေါင်းစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်
Next: တကယ်ချစ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ လက္ခဏာ များ